प्रदेश मन्त्री भन्छन्- भ्रमण वर्षका लागि संघीय सरकारले तयारी गरेन
अन्तर्वार्ता/विचार शनिबार, भदौ २१, २०७६
नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को तयारी सुस्त भएकोमा प्रदेश सरकारहरूले तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल भन्छन्, “समन्वय नहुँदा प्रवद्र्घनका काम हुन सकेनन्।”
नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीप्रति तपाईंहरूको असन्तुष्टि किन ?
भ्रमण वर्षको तयारी नै भएन । अहिलेसम्म जुन रफ्तारमा कामहरू हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन ।
भ्रमण वर्ष मूल आयोजक समितिका अहिलेसम्म चार वटा बैठक भए । तर पुरानै कुरा दोहोर्‍याउने र फोटोहरू देखाउने काम मात्र गरियो । भ्रमण वर्ष सफल बनाउन निश्चित योजना अनुसार काम गर्नुपर्छ ।
के हुनुपर्थ्याे ?
हामी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिरहेका छौं । त्यसका लागि हाम्रो तयारी के छ त ? स्थानीय तहहरूलाई आह्वान गरेर पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधारका अधुरा कामहरू पूरा गर्नुपर्‍यो । तर यी केही पनि भएको देखिंदैन ।
समन्वय नभएको हो ?
संविधानले सबै निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न जोड दिए पनि व्यवहारमा त्यो देखिन सकेको छैन । हाम्रो काम गर्ने तरिका पुरानै छ । भ्रमण वर्ष जस्तो राष्ट्रिय कार्यक्रममा सबैको एउटै ताल र स्वर भए मात्र हामी सफल हुन्छौं ।
भ्रमण वर्षको तयारी कसले गर्नुपर्ने हो ?
यसको मुख्य जिम्मा संघीय पर्यटन मन्त्रालयको हो । मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डबाट हुनुपर्ने सामान्य काम समेत हुनसकेका छैनन् । भ्रमण वर्ष सफल पार्न निजी क्षेत्रलाई बढी भन्दा बढी परिचालन गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको देखिएन । विभिन्न क्षेत्रमा अवरोध छन् ।
कस्ता अवरोध ?
प्रदेश–२ ले भारतका विभिन्न शहरमा बस सेवा सञ्चालन गरेर भारतीय पर्यटकलाई जनकपुर ल्याइरहेको छ । त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले जनकपुर–पोखरा हवाई उडानका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको छ । हाम्रो जोड पनि त्यही हो ।
अहिले जनकपुरबाट पोखरा आउन चाहने पर्यटक काठमाडौं पुगेर आउनुपर्छ । हाम्रो जोड पोखराबाट सातै प्रदेशमा सीधा हवाई सेवा सञ्चालन गरौं भन्ने हो । तर यसमा विमान कम्पनीहरूले अवरोध गरिरहेका छन् । यो एउटा उदाहरण हो । यस्ता समस्या अरु पनि छन् ।